श्रीमानको मोबाईलमा नचिनेको नम्बरबाट आफ्नै श्रीमतीकै अ’र्ध’न’ग्न तस्वीर त्योपनि परपुरुषसंग संगै भएको हुरहुर्ती आएपछि……………..(भिडियोसहित) – Wow Sansar
श्रीमानको मोबाईलमा नचिनेको नम्बरबाट आफ्नै श्रीमतीकै अ’र्ध’न’ग्न तस्वीर त्योपनि परपुरुषसंग संगै भएको हुरहुर्ती आएपछि……………..(भिडियोसहित)
रुकुम । श्रीमान विदेशमा दुःख गर्ने घरमा श्रीमतीले अर्कैसंग माया पिरती गाँस्ने । यो त हिजोआजको नेपालको चलन जस्तै भईसकेको छ । सिस्ने गाउँपालिका वडा नं. ५ को रुकुमकोटमा एउटा यस्तो घटना घटेको छ जुन घटना सुन्ने सबै दंग परेका छन् । यस्ता घटनाहरु प्राय फिल्मी पर्दाहरुमा देख्ने गरेका छौं ।
तर रुकुमकोटमा फिल्मी पर्दामा देखिने घटना वास्तविकतामा नै घटेको छ । जुन कुरा पत्याउन जो केहीलाई पनि त्यत्ति सहज भने हुँदैन । खासमा घटना के थियो भने एक दिन मोबाई खेलाएरै बसिरहेका धर्मराज शाहीको मोबाईलमा एउटा नचिनेको नम्बरबाट फोटो आउँछ ।
दुर्भाग्य त्यो फोटो उनकै श्रीमती सुशीला शाहीको अ’र्ध’न’ग्न फोटो हुन्छ । जुन फोटोमा सुशिलाको पछाडि पट्टीको भाग पठाईएको हुन्छ । जुन भागमा सुशिलाले ट्याटु खोपेकि छन् ।
धर्मराजले आफ्नी श्रीमतीको ढाड हो भनेर चिनि हाल्छन् । किनकी उनकी श्रीमतीले ढाडमा ट्याटु खोपेपछि श्रीमानलाई फोटो पठाएकी थिईन् । त्यही फोटोलाई धर्मराजले फेरी फेरी नियालेर हेरेपछि आफ्नै श्रीमती हो भन्ने थाहा पाउँछन् । यो कुरा थाहा पाएका धर्मराज निकै नै दुःखी र उदास हुन्छन् ।
विदेशको भूमिमा धर्मराजले खुन पसिना बगाएको झण्डै ११ वर्ष हुन लागेको रहेछ । श्रीमानले उता दुःख गर्ने यता श्रीमतीले श्रीमानको कमाईमा यस आराम गर्नुका साथै अर्कैसंग माया पिरती गाँस्ने ।
अर्कैसंग माया पिरती गाँसेकी धर्मराजकी श्रीमती सुशिलाले धर्मराजले दुःख गरेर कमाएको ६० लाख रुपैया बोकेर नाठोसंग भागिदिईन् । पिडित धर्मराजले आफ्ना दुःखका कुरा यसरी सुनाउँछन् । भिडियासहित
Prevप्रचण्डले काम गर्न नदिएका ओलीले रातारात गरे ठूलो जनमुखी फैसला, चौतर्फी प्रशंसा!
Next३० जना लुटेराले सहर नै कब्जा गरेर सबै बैकका पैसा निकालेर सडकमा छरेपछि…
प्रचण्डले काम गर्न नदिएका ओलीले रातारात गरे ठूलो जनमुखी फैसला, चौतर्फी प्रशंसा!
काठमाण्डौ बाट आयो साह्रै दुःखको खबर।गरिबको सधैं यस्तै अन्त्य हो त?
निर्मलाको ज्या.न लि.ने अ.पराधीको बारेमा यस्तो सूचना प्रहरीलाई आएपछि… (1369)